Ziva Zvese, Saka Iwe Unogona Kuita Chero Chinhu: Sei 6sense Iri Kuvhiringidza iyo ABM Indasitiri | Martech Zone
Ziva Zvese, Saka Iwe Unogona Kuita Chero Chinhu: Sei 6sense Iri Kuvhiringidza iyo ABM Indasitiri
B2B kutenga kwachinja - vatengi vemazuva ano havazivikanwe, vakapatsanurwa uye vanopokana. B2B Kutengesa uye Kushambadzira kuedza kuri kuramba kuchiderera uye kushomeka sezvo zvikwata zvinounza mari zvichirwira kugara-uchidzikira kwekutarisa kubva kune vatengi uye tarisiro munzvimbo yakatekeshera uye iri kuwedzera ruzha. Kukwikwidza uye kuhwina nhasi, B2B mari zvikwata zvinoda kushandura maitiro avo kuti vagare zvinodiwa nevatengi vemazuva ano eB2B.
Mune yanhasi B2B kutenga nzvimbo, vatengi vari:
kusazivikanwa - Muchokwadi, chete gumi muzana yevashanyi vewebhusaiti vanozvizivisa.
Yakapatsanurwa - paavhareji, 9.6 vanhu vanobatanidzwa mune yakasarudzika B2B kutenga sarudzo;
Kurwisana - 70 muzana yekutengesa kutenderera kunopedzwa usati wasangana nemutengesi
Izvi zvinoreva kuti vatengi vari mukutonga kwerwendo. Izvi zvinogona kugara zvichishungurudza zvikwata zvemari zviri kukundikana kubatana nevatengi vavo panguva yakakodzera, ine meseji chaiyo. Chokwadi ndechekuti; haisi vanhu, hunhu hwekushanda, kana dambudziko rekugadzirisa - Idambudziko redata.
Kiyi yekugadzirisa dambudziko iri kushandisa AI neBig Data kupa zvikwata zvemari nemufananidzo wakazara wevatengi, zvichipa ruzivo mune zvese zvinozivikanwa uye zvisingazivikanwe zviitiko. Izvi zvinoda kutama kubva pakubiridzira pamwe chete kunyorera zvikumbiro uye kuisa mari mune yakazara chikuva inokwanisa kutora uye kuongorora iyo inodiwa dhata kugadzirisa nzira iyo vatengi vemazuva ano vanotenga (isingazivikanwe, yakakamurwa, inopesana).
Takanga tine Fit Modeling application, Intent Detection application, uyezve tanga tichiratidza kushambadza. Kubudikidza ne6sense takakwanisa kubatanidza vese avo kuita chikuva chimwe chinoshanda mukati mezvikamu zvakasiyana kuitira kuti tive nemufananidzo wakazara wezviri kuitika.
Nick Ezzo, VP yeChidimbu Chizvarwa, Sage Intacct
Kukwikwidza uye Kukunda ne6sense
6sense yakagadzirirwa maakaundi azvino akavakirwa maSales uye Ekushambadzira zvikwata, zvichivapa kugona kuburitsa hunhu husingazivikanwe hwekutenga, kuisa pamberi uye nguva bhajeti inoenderana nemaakaundi mumusika, uye kukunda vatengi vasingagone nekuita yavo yakasarudzika, yakawanda-chiteshi kubatanidzwa pachiyero.
Iko kugona kuunganidza, kubatanidza uye kutora mukana weCustomer Insights ndiyo kiyi yekubudirira kweABM. Vazhinji vari kutsvaga tekinoroji yeABM inotanga nekubvunza kuti chii chigadzirwa kana chikuva chinogona KUITA; chii chakazara chikamu chakatarwa. Ivo vanofanirwa kunge vachibvunza kuti Mutengi Insight Dhata inoshandiswa sei kugonesa uye kupa masimba iwo masimba. Uye nepo isu tichitenda kuti 6sense inozopedzisira yaendesa chakazara chikamu chakatarwa muKutengesa uye Kushambadzira, hwaro hunofanira kuvakwa paAI-Inotungamirwa Vatengi Kunzwisisa, kana pasina mabhero uye muridzo zvinoreva chinhu. Ndokusaka tagline yedu inotanga na Ziva Zvese - chinangwa chedu ndechekuisa simba reAI neBig Data kumashure kweumwe neumwe weKutengesa uye Kushambadzira nyanzvi nekuti kana tikadaro, tinotenda kuti vanogona 'Kuita Chero Chinhu (zvakanaka padyo).
Latane Conant Chief Kushambadzira Officer pa6sense
Pfungwa yeABM ndeyekuvandudza zvakanyanya kunongedzera, nguva, uye kuita munhu. Izvi zvinoda mufananidzo uzere wevatengi vako wekutenga rwendo, kusanganisira isingazivikanwe chiitiko iko zvino ndiyo yakawanda yerwendo rweB2B rwekutenga. 6sense inodaidza iyi yako Rima Rinoshanda.
6sense Vatengi vari kushandisa chikuva kuti vanyatso kuyera yavo ABM kuyedza, kuitisa iyo yakawanda yematare ekushandisa pane ese ari maviri Kushambadzira uye Kutengesa.
Icho Proof iri mune Zvabuda zveVatengi
6sense vatengi vari kukohwa mabhenefiti eAI-inofambiswa Akaunti Yakavakirwa Orchestration, ine chaiko mhedzisiro senge 40% + kuwedzera mumikana, hombe average average dhizaini, kukurumidza kutengesa macircuit, uye yakakwira win mitengo. Mumwe wevatengi vakadaro PGi, mutungamiri wepasirese mukubatana. PGi yaida kuziva
Maitiro ekuzvisiyanisa ivo pachavo mune yakasangana, inokwikwidza musika
Maitiro ekutarisisa kwavo ABM kuyedza pane maakaundi akakosha
Maitiro ekuona kubatana kwakabatana pakati peKushambadzira neKutengesa
Vachishandisa 6sense ivo vakakwanisa kutarisa kuedza kumaaccount 'mumusika' uye nekupa chaiyo-nguva nzwisiso kuKutengesa kuverengera nzira dzakakodzera uye meseji yakasvikwa tarisiro pakutanga kwekutengesa. Izvi zvakaguma ne 68 muzana inowedzera munguva-yekutaurirana, 77 muzana inowedzera mumitengo, uye 9X kuwedzera muvhareji dhizaizi dhizaini.
6sense vatengi zvakare vanokwanisa kunongedza kwavo mameseji zvichibva pane izvo chaizvo vatengi vane hanya nazvo uye vari kushingairira kutsvaga. Mediafly, wekutengesa chinogonesa chikuva mutungamiri muEvolution Selling ™, aida kuwedzera mhando uye huwandu hwemaakaunzi anouya kuwebhusaiti yavo. Vaida kuziva:
Ndeapi maakaunzi aiuya kuwebhusaiti yavo asingazivikanwe, uye ayo aitsvaga mhinduro asi asingashanyire webhusaiti yavo - aka kufumura yavo Rima Funnel
Ndeapi misoro akakosha maakaunzi mumusika kutarisirwa nezve zvinoenderana nechinangwa chiratidzo
Maitiro ekunangisa avo ABM zvirongwa zveshambadziro kuti vakwanise kusvika maakaunzi mune yavo Rima Funnel
Ndevapi vanhu vanonongedzera neayo ABM kuratidza kushambadzira
Nekufumura yavo Rima Rinoshanda uye nekunzwisisa kutenga maitiro anoenderana nechinangwa chiratidzo, Mediafly yakakwanisa hyper-tarisa iri ABM kuratidza kushambadza kumaakhawunti akanaka uye manas, zvichikonzera 10X yakakura kudzvanya-kuburikidza nemitengo pamatanho akagadziriswa, uye a 10X uye kuwedzera mikana inbound.
Kushambadzira uye Kutengesa masangano anotarisa kushandisa nzira yekubudirira kutora uye kuyera ABM inofanirwa kufunga Iyo 6sense Akaunti Yakavakirwa Orchestration Platform, Inotungamirwa neAI, pane kubatanidza pamwechete chinangwa data, 3rd bato dhata, ABM inoratidza kushambadzira tekinoroji, uye analytics. Maonero anotungamirwa neAI anovimbisa iyo 6sense chikuva inounza meseji chaiyo kumunhu chaiye panguva yakakodzera uye inopa kuoneka murwendo rwakazara rwevatengi - kunyanya chiitiko chiri kuitika chisingazivikanwe kuti akawanda maB2B Ekutengesa nekutengesa zvikwata zvinorasikirwa.
Hautende here? Tanga kufumura yako yakasviba faneli izvozvi!
Tags: abmaccount based kushambadzirab2bbhizinesi kune bhizinesifanera rakasviba
Jifflenow: Sei uyu Musangano Automation Platform Inokanganisa Chiitiko ROI